Mitarika antsika ho amin'ny marina rehetra Izy
"Fa raha tonga ny Fanahin'ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin'ny marina rehetra; fa tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay ho reny dia holazainy avokoa; ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo" - Jao. 16:13.
Tokony hotarihin'ny Fanahy Masina ny mpanompon'Andriamanitra rehetra. Tsy hain'ny mpandeha ny hahalavorary ny diany. Ny lalantsika, na sarotra manao ahoana aza, dia nosoritan'ny Tompo ho antsika; ary izany no tsy maintsy izorantsika. — Ms, 42, 1901
Efa niantohan'i Kristy ny hahatonga ny fiangonany ho tena voaova, sy hazavain'ny tara-pahazavan'ny lanitra, ary hanana ny voninahitr'i Imanoela. Fikasany ny hahatonga ny Kristianina tsirairay ho voahodidina rivo-piainana ara-panahy sy fahazavan'ny fiadanana. Tsy misy fetra ny asa liana ny olona izay mahafoy ny izahony ka mamela ny Fanahy Masina hiasa ao am-pony sy manokana tanteraka ny fiainany ho an' Andriamanitra (...)
Ho antsika ankehitriny, toy ny ho an' ireo mpianatra voalohany, no nanomezana ny teny fikasana ny amin'ny handrotsahana ny Fanahy. Vonona Andriamanitra ny hanome antsika ny hery avy any ambony ankehitriny, toy ny nanomezany izany tamin'ny andro Pentekosta ho an'ireo izay nandray ny hafatry ny famonjena. Amin'izao ora izao, ny Fanahiny sy ny fahasoavany dia azon'izay rehetra mila izany ka hihazona Azy amin'ny Teniny. — TFC 8:19,20
Ampianaro ny zanakareo fa afaka mandray isan'andro ny batisan'ny Fanahy Masina izy ireo. — CG, 69,70
Ireo izay tarihin'ny Fanahin'Andriamanitra dia tsy hanana hafanam-po diso toerana, fa ho tony sy hiorina tsara, tsy haneho fiheverana na teny na fihetsika mihoapampana. Eo anivon'ny fifanjevoan'ny fampianaran-diso mamitaka samihafa isika. Koa ny Fanahin'Andriamanitra no ho mpitarika sy fialofana ho an'ireo izay tsy nanda ny porofon'ny fahamarinana ka tsy nihaino afa-tsy ny feo izay avy amin'Ilay Fahamarinana. — GW, 289